ती अघोषित शब्दहरु | War Of Words Over Words…
ती अघोषित शब्दहरु
झरिमा परेर निथ्रुक्कै भिजेको भएपनी आज अनन्तलाई कतिपनी जाडो लागेको छैन । उ एकदमै रोमन्टिक मुडमा छ । बानेश्वरमा एक्कासी अन्जुलाई भेटेपछी उभित्र अनेकौ तरंग उम्लेर आए । उसमा एकाएक फुर्ती बढेर आयो । उसले आफ्नो जीवनको अनी यसका अनगिन्ती रहरहरुको ठुलो महत्व देख्यो । अन्जु, उसको स्कुले जीवनको एउटै कक्षामा पढ्ने साथी हो । १०-१० बर्षसम्म सगैँ पढेर पनि अनन्त, अन्जुसंग खुलेर बोल्न सकेको छैन, आजपनी उनिहरुबिच बोलचाल भएको त हैन तरपनी अन्जुले अनन्तलाई देख्नेबित्तिकै हात ठडाएर मीठो मुस्कान छोडेकी हुनाले उसभित्र एकाएक यो परिवर्तन आएको हो । मुस्कानको त्यो साह्रै स्निग्ध जादुले अनन्त वास्तवमै मोहित भयो । घर आइपुग्दा सांझ परिसकेको थियो, हतार हतार खाना खाएर उ आफ्नो कोठा भित्र पस्यो । आफ्नो पुरानो स्कुले जीवनको डायरी पल्टाएर उसले संरक्षित गरी राखेका केही फोटो हेर्न थाल्यो । अन्जुलाई बिशेष हेर्‍यो र त्यो समयका दिनहरु सम्झियो । आज उसले देखेको अन्जु र त्यो फोटोको अन्जुमा खासै भिन्नता पाएन । उही सरलता, उही हेराइ, मुस्कानमा उही जादु उ थप मर्माहत भयो । बिस्तारै सुत्ने तरखर गर्न थाल्यो तर उसलाई निद्रा लागेन । म कहिले सम्म अन्जुभक्त भएर बस्नु, किन मैंले भन्न सकिन । के म उसलाई माया गर्दिन र ! यदी सांच्चै चाहन्छु भने किन लजाइरहेछु त ? माया गर्नु पाप त होइन नि,उ यस्तै यस्तै कुरा सोच्न थाल्यो । कोल्टे फर्कियो, उही मुस्कान उसको सामुन्ने आयो, भिजेकी अन्जु अनी म्रिदुमुस्कान; उ साह्रै पग्लिएको थियो त्यसबखत । वास्तवमा त्यो मुस्कानले सबैचिज भन्दै थियो, त्यहाँ पक्कै सर्वस्व छ; नबुझ्नु मेरो कमजोरी हुन सक्छ । अन्जुको मुस्कान भित्रको अघोषित शब्दहरु उ खोतल्न थाल्यो । एकाएक उसको मनभरी हर्ष र उमंगको छालहरु उम्लेर आए । उसलाई राति नै अन्जुलाई भेटौं जस्तो भयो । मन थाम्न सकेन र उठेर गजल लेख्न थाल्यो:
मन भित्र आँधी चल्छ तिमी मुस्कुराउँदा ।
बिगतको काहानी जल्छ तिमी मुस्कुराउँदा ।
सक्दिन सम्हाल्न आफुलाई,छटपट छ पलपल
जीवनको पिर ब्यथा ढल्छ तिमी मुस्कुराउँदा ।
कतिन्जेल तड्पु भन, तिम्रो यो अभावमा
प्रकृतिको आभाष गल्छ, तिमी मुस्कुराउँदा ।
मनभित्र आँधी चल्छ तिमी मुस्कुराउँदा ।
संसारका यि सबै मानवनिर्मित भाषाका तरङगहरु अब अनन्तलाई वाहियात लाग्न थाले । उसले एकछिन भाषा रहितको बिछुट्टै आनन्दको संसारको कल्पना गर्‍यो, जुन संसारमा केवल भावनात्मक मान्छे हुनेछन, भावनाले त्यो संसारमा राज गर्नेछ । मानव मानव बिचको त्यो घिनलाग्दो संचारले संसार प्रदुषित हुने छैन । त्यहाँ आँखा आँखा बिच कुरा हुनेछ । एकले अर्काको संवेदना सहजै बुझिनेछ । सांच्चै मानवता त त्यो संसारमा पो पाइनेछ, अनन्त एक्लै मुस्कुरायो । उ वास्तवमै धेरै नै खुशी भयो, अन्जुको लागि यस्तै यस्तै शब्दको दरिलो सम्योजन गरेर एउटा मीठो पत्र लेख्यो, उपहार भने भोली किन्छु र त्यही ठाउँमा कुरिरहन्छु भन्ने सोचेर उ फेरी सुत्ने तरखरमा लाग्यो । भोलिपल्ट त्यही ठाउँमा गएर अन्जुको बाटो कुरिरह्यो, उसले सोच्यो अब एकैछिनमा अन्जु आउनेछे, हिजो जस्तै उत्तिकै मीठो, उत्तिकै सरलता र उही म्रिदुल मुस्कानका साथ । अनी म अगाडी बढ्नेछु र यो मनको सबै हलचल उसलाई प्रष्टसंग सुनाउनेछु । नभन्दै अन्जु आई, हिजो भन्दा झन राम्री भएर, उत्तिकै सरलताको साथ तर आज उ एकदमै हतारिएकी थिई, उसले अनन्तलाई देखी तर पनि कत्ती मुस्कुराइन, उ झन चाँडो चाँडो त्यो बाटो भएर पार हुन लागि । अनन्तलाई अचम्म लाग्यो, उसले सोचेको पनि थिएन यस्तो होला भनेर । हेर्दा हेर्दै अन्जु धेरै टाढा पुगी, उसको आँखा बिस्तारै धमिलो हुन लाग्यो । गहिरिएर अनन्तको आँखा नियाल्दा त्यहां प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो, मन फुटेर निस्केका भरोसाभित्रका ती दुर्लभ आँशुहरु ।
This entry was posted in Stories on जुन 7, 2009 by Prakash.
← Life isaSacrifice चुरोट र बेश्या →
4 thoughts on “ती अघोषित शब्दहरु”
samyojan जुन 7, 2009 मा 11:05 बिहान
sachhai tyo gazal chaihi ramro 6.
prem gautam जुन 7, 2009 मा 1:19 बेलुका
la la babal 6. aliali kharab jasto lagyo re sarita lae. ramchandra pani aliali hasdae thiyo.
risav sharma जुन 8, 2009 मा 2:21 बेलुका
timro lekh ramro6keep it up
deepesh जुन 17, 2009 मा 6:06 बिहान
ramro lago sayad nikki ramo vannu parla. suruat ma ramro prayas 6. vijako baishaulu yuti ko barnan kaliprasad rijal ko kesh bata tappa jharna pani banu lago…………….sanga mel khan 6. ra yo dherai pa6i vet huda keti ramri lagnu kati jar ki swashni bata prabhabit vayako lago ani yo umer ma ramri keti ko kalpana ma dubbnu sayad umer ko dosh po ho ki?